Published : 17 January, 2020 8:00 pm
आज बढ्यो सुनको मूल्य, कति पुग्यो तोलामा हेर्नुहोस !
सोमबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्यमा सामान्य वृद्धि भएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार
मेष(चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) राजनीति तथा समाजसेवामा जनताको काम गर्न हर कोषिश गर्दा गर्दै नसकिने हुदा आलोचनाको शिकार
मेष – मान सम्मान बढ्नेछ । व्यवसायमा राम्रो योग देखिन्छ । आम्दानीको श्रोत बढ्नाले आर्थिक
सुत्नु अघि पाथिभरा माताको दर्सन गरि भोलि २७ गते सनिबारको राशिफल पढ्नुहोस ! तपाइको भाग्य कस्तो ?